Juventus 'waxay ubaahantahay xirfad dheeri ah iyo ixtiraam' Conte oo ka hadlay ka dib markii Inter Coppa Italia laga reebay.
Home Horyaalka Italy Juventus ‘waxay ubaahantahay xirfad dheeri ah iyo ixtiraam’ Conte oo ka hadlay...
Juventus ‘waxay ubaahantahay xirfad dheeri ah iyo ixtiraam’ Conte oo ka hadlay ka dib markii Inter Coppa Italia laga reebay.
Antonio Conte ayaa laga reebay ciyaar kulul oo ka tirsaneed Semi finalska Copa Italia ciyaar ku dhamaatay 0-0 oo ka dhacday garoonka juventus ee Allianz Stadium ciyaarta kadib waxay isqabteen gudoomiyaha kooxda Juventus Andrea Agnelli.
Kooxda fadhigeedu yahay magaalada Milano ayaa lagu qabtay barbaro 0-0 ah lugta labaad ee garoonka Allianz iyadoo Old Lady ay u gudubtay finalka, 2-1 wadar ahaan, ka hor inta aan la soo bandhigin dhacdooyin fool xun oo la sheegay inay qarxeen ka dib dhawaaqii ugu dambeeyay.
Warbaahinta RAI ayaa soo werisay in Conte uu aflagaadeeyay shaqaalihiisii hore Agnelli nus-saac, iyo madaxa Juve oo aargudanaya isagoo aflagaadeeyay tababaraha Inter iyadoo kooxaha ay ka baxeen garoonka.
Conte wuxuu dhaleeceeyay habdhaqankiisii hore ee kooxda wareysigiisii ciyaarta ka dib laakiin wuxuu joojiyay inuu tilmaamo wax faro ah Juventus waa inay runta sheegtaa ayuu Conte u sheegay RAI Waxaan u maleynayaa in sarkaalkii afaraad uu maqlay oo arkay waxa dhacay ciyaarta oo dhan.
Waa inay si xushmad leh u muujiyaan aragtidayda. Waxay u baahan yihiin xirfad dheeri ah iyo ixtiraam kuwa shaqeeya Conte wuxuu macalin ka noqday Turin intii u dhaxeysay 2011 iyo 2014 wuxuuna u horseeday Bianconeri sedex horyaal oo Serie A ah ka hor inta uusan door ka qaadin Italy ka dib Koobkii Adduunka ee 2014.
51 jirkan ayaa wax laga weydiiyay dhacdada ka dhacday shirkiisa jaraa’id ee ciyaarta kadib laakiin wuu diiday inuu faahfaahin ka bixiyo Waxa dhacay dhamaadka ciyaarta Ma lihi rabitaan ama raalli kama aha inaan ka hadlo wax kasta, ”ayuu yidhi Conte.
Waxaan u maleynayaa in wax walba ay jiri doonaan waxbarasho Ku filan Kooxda ugu guulaha badan tartanka Juventus, ayaa u gudubta finalka si ay ula kulmaan Atalanta ama Napoli, iyadoo kooxda Andrea Pirlo ay raadineyso guushii 14aad ee Coppa Italia.
Previous articleManchester united oo loo sheegay in Cavani ay ka saxiixdaan waqti kale.
Next articleNeymar jr oo beeniyey inuu dhigan Rabo xaflada dhalashadiisa.